Maxaa dan u ah umadda soomaaliyeed?
Sawiradan waxaan gaar ugu soo qaatay waa iyaga oo badidood yihiin kuwa arimaha soomaaliya daneeya oo isugu jira madax dhaqameed ,culimaau diin .abwaanno ,wariyayaal .qoraa,hogaamiyayaal,iyo aqoonyahanno , iyo ciidamdii xoogga dalka .badidood waxay raad ku leyihiin xaaladda siyaasadda maanta ee dalka.
qoraalkuse in kasta oo uu qaarkood si toos ah u khuseeyo hadana su,aashaydu waxay ku jeedaa umadda soomaaliyeed oo dhan iyo qof kasta oo ka damqnaaya dhibka umadda soomaaliyeed danaynayanaan in umadani dhibka ay ka baxado.
waxaa laga yaabaa in qaar badani is weydiiyaan maxaad ugu dari weyday madaxda somaliland taasna jawaabteedu waa sahal oo qadiyadda somaliland maanta xiligan la joogo lagum dhex qasi karo xaaladda soomaliya ka taagan.
scw: salaan ka dib waxaan umadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan u rajaynayaa khayr iyo barwaaqo iyo nabad waarta oo ka dhalata dalkeenna iyo inaga oo garana danteenna iyo tan dhalaanka dhalan doona maalmaha soo socda iyo qarniyada soo socdaba.
Su,aashayda inta aanan ku bilaabin waxaa qof walbaa ogayahy in aynu ku jirnay rafaad iyo dhib muddo hadda laga joogo 120 sano oo ah laga soo bilaabo xilligii gumaysigu soo galay geeska afrika iyo gaar ahaan dalkeenna soomaaliya , xilligaas oo ah bilowga is nabcaysiga iyo is naca soomaalida iyo in la arko soomaali si dhab ah qalbiga isaga neceb.
waxaa laga yaabaa in dad badani ay aaminsanyihiin si ka duwan aragtidayda in kastoo aan u arko in aragtidaydu aanay wada sax noqon karin oo ay tahay fikir baniaadam hadana waxaan kalsooni weyn ku qabaa in aan aad ugu dhowahay xaqiiqada.
Haddii aan wax yar idiin guud maro gumaysiga ka hor soomaalidu waxay isku dili jirtay biyaha iyo daaqa xoolaha , dagaalkaas oo ahaa mid looga gudbo si sahlan loona heshiiyo inta geed la hoos fariisto iyada oo iska daa shisheeye e labada reer oo dagalaamay aan reer sadexaad soo dhex geli jirin ilaa marka heshiisku dhaco oo la soo af jaro coladii iyo dhibkii jiray markaas mooyaane.
Maanta waxaa yaab ah in soomaalidu markii ay dagaalanto ay colaadu gaarto ilaa 30 sano ama ka badan lana waayo cid so afjarta colaadaas iyo nacaybka ka dhasha loona gudbiyo kuwa dhashay colaadaas ka dib aana la socon balse uun lagu beeray nacaybka reer hebel.
Waxaa wax lala yaabo ah in wiil yar oo 15 jir ah uu maanta ku doodo ama ka faaloodo colaad dhexmartay reerkiisa iyo reer kale isagoo warka uu haystaa uu yahay kutiri ku teen ay reerkiisa iyo qoyskiisu u laqimeen ama afka u geliyeen.
Dagaaladii u dambeeyey oo 17 sano ee la soo dhaafay socday waxaad moodaa in ay umaddu u malayso wax bilowday 17kaas sano balse anigu waxaan aaminsanahay in ay yihiin wixii ka soo baxay 100 sano ee tegay iyo dhibaatooyinkii umaddu kala galaysay.
Maanta waxaan gaarnay in aanaan ku heshiin karin sheekh caalim ah oo reer walba uu sheekhiisa u haysto sheekha wax yaqaan,sidoo kale aqoonyahankooda iyo siyaasigooda.
Waxaan gaarnay inaanaan ku heshiin oo aynaan isku raaci karin hogaamiye ama halyeey qaran oo soomaaliyeed oo nin walbaa uu mid u haysto halyeey.
Waxaa dhacda in nin reer u haysto halyeey ay reerka kale u haystaan inuu yahay arxanlaawe umadda kal dhameeyey,aana lagu tilmaami karin wax wanaag ah taariikhna loo ogolaan karin.
Sayid maxamad cabdulle xasan oo halgankii daraawiishta aabe u ahaa dad badan ayaa u yaqaan dhiig yacab .
Dowladda pakistan waxaa ilaa maanta suran xafiiska madaxweyne kasta oo soo mara pakistan sawirkii aasaasahii pakistan Muxammad Cali Jinaax , sidoo kale waxay aad u qiimeeyaan gabayaagii weynaa ee Claalma Muxamad Iqbal.Caalamaka badidiisuna waa isku raacsan yahiin halyeygooda iyo halgamayaashooda.
Maanta waxaan arakay in dad badan oo soomali ah ay shaki gelkiyeen syl ,qaar kale ay xitaa Aaadan cadde iyo shakhsiyadiisii diideen inuu ahaa aabbe qaran oo soomalinimo ku sifoobay, halka aan arkay kuwo xaaji aadan afqalloc iyo suldaan tima cadde diidan inay ahaayeen wadaniyiin soomaaliyeed Waxaa waxaas oo dhan ka sii daran in aan qarinamadii ku kala tagnay oo maanta in aan noqono jamhuuriyado badan ay dhici karto oo loo kala baxo ilaa 8 dal oo kal gooni ah yaanba ictiraaf dowli ah la heline.
Dhibkaas aan sheegay iyo khilaafkaa xoogan waxaa ka daran dulmiga iyo dhibka haysta umadda soomaaliyeed gaar ahaan haweenka iyo caruurta loo geysanaayo tacdiyada iyo xasuuqa , iyo joogitaanka uu dalkeenii maanta ay joogaan ciidamo itoobiyaan ah oo weliba ku sugan caasimaddii dalkeenna hogaankiisana ay wax ka hayaan iyo taladiisaba.
Allow shacabku daalyaye
Dulmaa lagu dhameeyaye
Allow lama daneeyee
Allow lama daweeyee
Allow sida dugaagaa
Xumaan lagu daldalayaa
Allow daayin baad tahay
Allow daymo soo dhugo.
Allow roobka da,ayaba
Adaa noogu deeqaye
Allow dayrta kaa da,ay
Intaan dooggu soo bixin
Allow nagu dabiiboo
Allow daahir naga yeel.
Waxaa wax laga naxo ah in maanta ay dhibaatadu ku habsatay dhalinyaradii waayeelkii iyo qaybahii bulashada oo dhan, caalamkuna ka yaabanyahay dhibaka iyo rafaadka haysta dadkeena. waxaa waxa laga naxo ah in wiil yar oo aan garin 15 sano uu dul fuulo qori kuna xasuuqaayo dadkiisa isaga oo aan garanayn waxa uu u dagaalamaayo.
Waxaa aad arkaysaa hooyooyin iyo caruur yaryar ah oo qaxaaya oo rafaadsan gaajo iyo haraadna uu dilay,waxaad kaloo arkaysaa waayeel dayc iyo dhib oo dhami uu ka muuqdo.
sawirka hoose waa magaalada muqdisho oo ku sugnayd markaas nabad iyo barwaaqo.
sawirkan waxaa laga yaabaa in aan caruur badani arag weligood waa shirkadii somalita oo dhoofin jirta mooska ahaydna shirkad caalami ah.
somali air lines waa shirkaddii diyaaradaha soomaaliyeed.
waa aaabahii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal daaud cabulle xirsi alle ha u naxariisto.
waa masjidkii isbahaysiga islaamka ,maanta sidee yahay subxaanalaah.
Hadaba haddii aan u soo laabto su,aashaydii ahayd maxaa soomaali u dan ah idinka ayaan diin dhiibay gaar ahaan aqoonyahaynka iyo culimada iyo dhalinyarada soomaaliyeedba ma waxaa xal ku jiraa inaan dagaal iyo colaad ku jirno mise inaan u soo jeensano danta dalka iyo dadka soomaaliyeed ee masuulidiisu ina saarantahay allena inagula xisabtami doono.
waxaan idn leeyahayn miyaan la gaarin waqtigii aan ka bixin lahayn qabiil iyo nin jeclaysi iyo in aan u xisaabtanno sidii cadowgii oo aan meel u wada jeensanno hogaankana u dhiibano kuwa ku sifoobay daacadnimo iyo wanaag iyo jacaylka nabadda soomaaliyeed.
waxaan idiin rajaynayaa nabad iyo khayr iyo dalkeenna oo nabad ku waara iyo horumar.waxaan ku soo gunaanadaaya erayo kamid ah gabay aan hore u qoray.
Allow diiftii waayaha
Dadku ay illoobaan
Allow dunidu aragtaa
Moos laga dalbanayoo
Looga soo dalxiisaa
Diin soor ilaa xamar
Ilaa degelka laasqoray
Ilaa webiga dananee
Daafaha buraan mara
Dibadaha u dhooofshaan.
Allow derisku naga baqo
Allow damaca xabashigu
Dib intuu u sii laqo
Cabsi lagu dulleeyaa
Allow degelka naga maqan
Duullaan intaan diro
Dadkaygoo walaala ah
Dib u soo xoraynaa
Shantii dabar ku xidhanaa.
Allow daacad baan ahay
Allow daahir baan ahay
Allow dawga nebigii
Ruux daayimaan ahay
Allow duqa bashiiree
Allow duqii caduurbaa
Awoow iigu soodega
Allow dacal la eegaba
Diir saalixaan ahay
Alloow ducada iga qabo
Aamiin dadow dhaha
Marbuu dalabku furnyahay